Dadka Dulqaadkii wuu ka Dhamaaday | allsanaag
Dadka Dulqaadkii wuu ka Dhamaaday
Dagaalka ka socda magaalada Tukaraq ma ahan mid ay dawladda federaalka ay shaqo ku leedahay, waxaanan ognahay in dawladda federaalka ay iyadiiba suggi la’dahay ammaanka caasimada Muqdisho. Arrinta Puntland iyo Maamulka Hargeeysana waa mid waqti dheer soo taxneed.
Hadaba, siyaasiyiinta beesha Isaaq waxa ay doonayaan ineey weeciyaan dhaqan xummada ay ka wadaan gobolada Sool iyo Sanaag. Ma jiro qof Daarood ah oo dagaal iyo kibir la raasanaya beesha Isaaq, balse cidda 30 sanno laga seexan la yahay waa beesha Isaaq.
Siyaasiyiinta SNMta ma ahan ineey dawladda federaalka iyo waxaan loo joogin ay isku qaadaan. Waxaad inta badan maqleeysaa siyaasiyiinta SNMta oo leh xudduudkii Ingiriiska ayaan soo xirreeynaa, Garoowe ayaa laga qaxayaa, dhulka ma guurree dadkaa guura ee dadkaas dhulka haka guuraan, Soomaaliland waa muqadas iyo boqolaal niic oo aan halkan lagu soo koobi karin.
Hadaba, beesha Isaaqna diin, dhaqan iyo wallaaloow i daa yeeli waaye, marka dadkaas waxa deeqa oo kalliya waa xabad, dhulka ay doonayaan waxaa hadaaqiisa looga joojin karaa waa iyadoo meedkooda meel kasta la waro, marka maamulka iyo shacabka Puntland waa in ay u diyaar garoobaan sida Madaxweeyne Gaas uu sheegay dagaal aan joogsan tan iyo inta ay nimankaa faraha kalla baxayaan gobolada Sool iyo Sanaag.
Isaaq haddii uu doonayo inuu maamul sameeysto waa in uu inta illaahay uu dajiyey maamul ay ka sameeystaan ama aqoonsi hagu helleen ama haku waayeen, ayna iska illaawaan dhul aysan laheen oo xoog lagu raadiyo. Wax kastana xad iyo waqti ayeey leeyihiin dadka waqtigan dulqaadkii waa uu ka soo dhamaaday Soomaalidana waxeey tiraahdaa, “Cagtii joogsan weeyda, mar beey ceeb la kullantaa.”
← Ogaysiis Reer Puntland Isutaagga midnimadda ee gobolka Sanaag waa soolyaal dheer fududaynayana isla helidda qaranka Soomaaliya. →